त्रिपिटक पढ्न सजिलो- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
त्रिपिटक पढ्न सजिलो
२५६२ औं बुद्धजयन्ती
वैशाख १५, २०७५ हिमेश वज्राचार्य
काठमाडौँ — बुद्धले प्रवर्तित गरेको धर्म तथा स्थापना गरेको संघको प्रमाणित जानकारी दिने एक मात्र भाषा हो, पालि । त्यसैले पालि भाषा र त्यसका साहित्य कुनै पनि दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छ । सिद्धार्थ गौतमले २९ वर्षका गृहस्थी त्यागे, त्यसको छ वर्षपछि बुद्धत्व प्राप्त गरे । उनको महापरिनिर्वाण ८० वर्षको आयुमा भएको थियो । त्यो अर्थमा बुद्धले ४५ वर्षसम्म बुद्धले जे जति गरे, जो कोहीलाई जे सुनाए, त्यो सबै त्रिपिटकका रूपमा सुरक्षित छ ।
अनि यो नै पालि साहित्यको मूल स्रोत हो । यस भाषाका विद्वान्हरू के मान्छन् भने यो भाषा सरल र स्वाभाविक छ, अनि उत्तिकै आकर्षक पनि । पालिभारतको पश्चिम प्रदेशको कुनैभाषारहेको हुनुपर्छ र यसको विकासमा संस्कृतको राम्रो हात रहेको हुनुपर्छ । जे होस्, बौद्ध धर्मबारे आधिकारिक रूपमा बुझ्ने र जान्ने हो भने पालि भाषाको ज्ञान अनिवार्य हुन्छ । पछिल्लो समय हाम्रोमा यो भाषाबारे राम्रो दखल राख्ने विरलै पाइन्छ ।
बुझ्ने र जान्ने प्रयास गर्ने हो भने यो कठिन छ । कम्तीमा अब यो काम केही हदसम्म सजिलो भने हुनेछ, यदि तपाईंलाई नेपाल भाषाको पनि ज्ञान छ भने । पालिबारे धेरै ज्ञान भएका नेपालिमा पर्छन्, दुण्डबहादुर वज्राचार्य । उनकै लगातार छ वर्षको प्रयासले तयार भएको छ, पालि नेपाल भाषा शब्दकोश । यसमा २१ हजारको हाराहारीमा शब्द छन् र यसले पक्कै पनि पालि साहित्य बुझ्न मदत गर्नेछ । अथवा सीधै भन्दा त्रिपिटक पढ्न सजिलो हुनेछ ।
त्यसो त पालि भाषाको शब्दकोश नेपालमा प्रकाशित भएको यो पहिलोपल्ट भने होइन । भिक्षु अमृतानन्दले धेरै अगाडि पालि भाषाको शब्दकोश निकालेका थिए र त्यसमा नेपालि र नेपाल भाषा दुवै प्रयोग गरिएका थिए । तर यसको स्वरूप संक्षिप्त रह्यो । यो भन्दा अहिले दुण्डबहादुरको सम्पादनमा निस्केको शब्दकोशको आकार धेरै ठूलो छ । यो आपंैmमा पूर्ण भने होइन । बौद्ध धर्म मान्ने बर्मा, थाइल्यान्ड र श्रीलंकातिर पालिका ठूलठूला शब्दकोष पाइन्छ ।
पालि नेपालभाषा शब्दकोशले कम्तीमा त्यस्त बृहत् पुस्तकको आधार भने तयार पारेको छ । यो शब्दकोश तयार पार्न दुण्डबहादुरलाई मद्दत गरेका छन्, भिक्षु चन्द्रगुप्त, भिक्षु धर्मगुप्त र अनागरिका अग्गञाणीले । यस पुस्तकको मूल्य रहेको छ, पाँच सय रुपैयाँ  । यही शब्दकोषसँगै त्रिपिटकका अरू दुई पुस्तक पनि प्रकाशित भएका छन् र ती हुन्, यमक र महावग्ग । दुवै पालिबाट नेपाल भाषामा अनुवाद भएर उपलब्ध भएका हुन् ।
यहाँनिर त्रिपिटकबारे छोटकरीमा बुझ्न आवश्यक हुन्छ । बुद्धको महापरिनिर्वाणपछि उनका शिष्यलाई के लाग्यो भने सबै उपदेशको संग्रह गर्नुपर्छ । भिक्षु महाकश्यपले बुद्धको उपदेश संग्रह गर्न सम्मेलन गर्ने निर्णय गरे । बौद्ध धर्मको इतिहासमा यस्ता सम्मेलन संगायनाका नामले प्रख्यात छन् । बुद्ध महापरिनिर्वाणको तीन महिनापछि पहिलो संगायना भएको थियो । यसै क्रममा धर्म र विनयसम्बन्धी उपदेश संकलन गरिए । पहिलो संगायनायता बुद्ध वचन सुरक्षित हुने काम सुरु भयो ।
इसापूर्व २९ को वरिपरि भिक्षुहरूले अनुभव गरे, यसरी मौखिक परम्पराले बुद्ध वचन सधैंका लागि चिरस्थायी हुने छैन । यसलाई लिपिबद्ध गर्न आवश्यक छ । त्यति बेला श्रीलंकामा राजा बट्टगामिणीको शासन चलिरहेको थियो । उनले बुद्ध वचन लिपिबद्ध गर्न सबै व्यवस्था मिलाए । यसका लागि एक अर्को संगायन भयो । यो टिपिटक संगायनाका नामले प्रख्यात छ । टिपिटक अर्थात् त्रिपिटक । यसको अर्थ हुन्छ, तीन थैलीको समूह । यी तीन पिटक हुन्, सुत्तपिटक, विनयपिटक र अभिधम्मपिटक ।
त्रिपिटककै माध्यमबाट तात्कालीन समयको इतिहास र संस्कृति पनि बुझ्न सकिन्छ । यमक अभिधम्मपिटकअन्तर्गतको छैटौं ग्रन्थ हो । यसमा चित्तबारे वैज्ञानिक व्याख्या गरिएको छ । यमकमा तीन खण्ड रहे पनि नेपालभाषामा भने यो बृहत् एउटै ग्रन्थका रूपमा उपलब्ध हुनेछ । यसका अनुवादक अनागरिका विमलज्ञाणी हुन् । यसको मूल्य आठ सय रुपैयाँ छ । विनयपटकअन्तर्गतको महावग्गका अनुवादक भने अनागारिका उत्पलवर्णा हुन् र मूल्य रहेको छ, ५ सय ५० रुपैयाँ । बुद्ध जीवनको प्रारम्भिक स्रोतका रूपमा रहेको छ ।
प्रकाशित : वैशाख १५, २०७५ ०८:४०
वर्तमान परिवेशमा पनि बोक्सीजस्तो कुप्रथालाई समाजले स्विकारेर कुनै व्यक्तिविशेषमा खनिनु र जीवन बर्बाद गर्न खोज्नु घोर अन्यायको पराकाष्ठा हो ।
वैशाख १५, २०७५ सुशीला अम्गाई
काठमाडौँ — साहित्यिक पत्रकार कमल रिजालको तेस्रो औपन्यासिक कृति हो– दृष्टिभ्रम । विशुद्ध सामाजिक पृष्ठभूमिमा लेखिएको यो उपन्यासले सामाजिक विसंगति र विकृति खोतल्ने प्रयत्न गरेको छ ।
दृष्टिभ्रमविधा : उपन्यासलेखक : कमल रिजालपृष्ठ : २५०मूल्य : रू. ३५०/–
उपन्यासमा विवेकशील पात्र चयन गर्दै पीडितका पक्षमा वकालत गरिएको छ । मनभित्रको तहगत स्वार्थलाई जब मान्छेले त्याग्ने कोसिस गर्दैन, तब मान्छेको अर्थ र अस्तित्व कहींकतै नरहने हुन्छ । ईष्र्या, रिस र घमण्डजस्ता तत्त्वले मानब स्वयम्लाई दिशाहीन बनाइरहेको यथार्थ ‘दृष्टिभ्रम’ ले प्रस्तुत गरेको छ । तन्त्रमन्त्र, झारफुक, बोक्सी, झाक्री विद्याप्रतिको जनविश्वास र आदिम पृष्ठभूमिका सन्दर्भमा उठेका रोचक प्रसङ्गले औपन्यासिक सौन्दर्यमा नवीनता थपेको छ ।
मान्छेभित्रको ईष्र्याले जब भयानक रूप लिन्छ, तब आरोप–प्रत्यारोपबीचबाट हिंसात्मक गतिविधि बढ्दा सामाजिक एकता भत्कन्छ नै । मानवीय व्यवहारका यस्तै बिम्बहरू उपन्यासमा समेटिएका छन् उपन्यासमा । वर्तमान परिवेशमा पनि बोक्सीजस्तो कुप्रथालाई स्विकार्दै कुनै व्यक्तिविशेषमा खनिनु घोर अन्यायको पराकाष्ठा हो । उपन्यासमा कानुनी निकायको गैरजिम्मेवारीप्रति दह्रो व्यङ्ग्य गरिएको छ ।
विविध मान्छे र तिनकै विचारको सम्मिश्रण हो— समाज । समाज तब मात्र सभ्य कहलाउँछ, जब अग्रगामी चेतनाको बाटोमा उन्मुख हुन्छ । समाज परिवर्तन हुन सामाजिक एकता र सद्भाव अपरिहार्य हुन्छ । अशिक्षा र अन्धविश्वासले गाँजेको नेपाली समाजमा झारफुक तन्त्रमन्त्रकै भरमा स्वास्थ्यलाभको प्रतीक्षा गरेर बस्दाबस्दै मृत्युवरण गरेको घटना पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् ।
उपन्यासकी प्रमुख नारी पात्र हुन्— चन्द्रावती । आफ्नो साख्यै काका मुरलीमनोहरले रचेको जालमा प्रताडना झेल्दाझेल्दै आफ्नो सुशिक्षित एवं समाजसेवी पति उनले गुमाएकी छन् भने छोरा विवेकको पनि पहिचान भएको छैन । एउटी नारीले बिनाकसुर एकपछि अर्को गर्दै झेलेका यस किसिमका पीडा सामान्य भने अवश्य होइनन् । अन्तत: वैयक्तिक जीवनमा अन्तर्घात गर्ने समाजका अधम पात्र स्वयं पश्चात्तापको भुंग्रोमा छट्पटिन पुगेका छन् । समाजमा बसेर मनपरी गर्ने, मानवीय संवेदनाको ख्याल नगरी अनेक लाञ्छना लगाउने र आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न पल्केकालाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन उपन्यास सफल भएको छ ।
यसै पनि महिलाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण भिन्नै छ समाजमा । अझ एकल महिलालाई बोक्सीको बिल्ला भिराउने संस्कार यथावत् छँदैछ । बिनाकसुर लगाइएका लाञ्छनाले प्रताडित बन्दै आत्महत्या गर्ने महिलाको संख्या पनि उत्तिकै छ नेपाली समाजमा । आरोपित हँुदै शारीरिक–मानसिक यातना खेपिरहनेको संख्या पनि त्यत्तिकै छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्— चितवन माडीकी ठेगनीदेवी र काठमाडौं जोरपाटीकी सुनीता पुडासैनी ।
उपन्यासले समाजको उत्थानमा बाधा पुर्‍याउने समाजभित्रै दबिएर रहेका सूक्ष्म कर्तुतलाई उदांगो पारेको छ । कुसंस्कारले सुन्दर परिवारिक संसारमा रमेकी युवतीको जीवनका हरेक पक्ष तहसनहस पारेको छ । समाजका बौद्धिक वर्ग आदर्शका कुरा गर्छन्, कुरीतिको भत्र्सना गरेजस्तो गर्छन् तर त्यसैको मौन समर्थन गरिरहेका हुन्छन् । सुन्दा सामान्य लाग्ने धेरै घटना उठेका भए पनि त्यसले वैयक्तिक मनोविज्ञानमा ल्याएको उतारचढावलाई गहन विश्लेषण गरेको छ उपन्यासले । उपन्यासकारले समाजसेवा गर्ने र पुख्र्यौली परम्परालाई निरन्तरता दिने बहानामा भैरहेका जघन्य अपराध निस्तेज गराउन राष्ट्रको न्याय प्रशासनलाई झक्झकाउने कोसिस गरेका छन् ।
महिलाहरूले अझै स्वतन्त्रताको श्वास फेर्न सकेका छैनन् । अरूको प्रगति र उन्नतिमा डाह गर्ने प्रशस्त हुन्छन् समाजमा । मान्छेको ईष्र्यालु र संकीर्ण मानसिकताको सफल शल्यक्रिया गरेको छ उपन्यास— दृष्टिभ्रमले । चितवन जिल्लाकै दुर्गम गाउँ माडी र त्यहाँका जान्नेमान्ने कहलाएका पूर्णप्रसाद पन्थी धर्मशास्त्रका आचार्य हुन् । ग्रहदशा हेर्न, झारफुक गर्न सिद्धहस्त छन् उनी । सम्पूर्ण गाउँलेको जन्ममृत्युका तीथिमिति पूरापूर ख्याल छ उनलाई तर मन भित्र भ्रम पालेका छन्— आफूजस्तै मान्छेलाई उनी मानवीयता दृष्टिले हेर्न सक्दैनन् ।
अन्तत: नितान्त सामाजिक उपन्यास दृष्टिभ्रमले मानिसमा रहेको चेतनाको स्तर र प्रवृत्तिगत स्वार्थलाई निकै गहिराइमा पुगेर विश्लेषण गरेको छ । झन्डै उस्तै पृष्ठभूमिका धेरै घटनाको लम्बेतान व्याख्या भइरहँदा पाठकको आश्वादन पक्षमा कमी आउनु स्वाभाविक पनि हो । कमल रिजालका उपन्यासले मुख्य विषयवस्तु बनाएका घटनाहरू नेपाली जनजिब्रोले देखे–भोगेका, सुनेका भए पनि त्यसले वैयक्तिक जीवनमा
पुर्‍याएका आघातहरू कहालीलाग्दा छन् । चेतना र न्यायपूर्ण समाजको निर्माणका लागि सशक्त आवाज हो— दृष्टिभ्रम।
पानी विश्वकप !
चीनमा योग खोज्दा
किन गर्ने योग ?
जो उड्न सिकाउँछिन्...
नीलम कार्की निहारिका